“Haddii aan ku guuleysano Premier League waxay aamusin doontaa kuwa na neceb!” – Maguire – Gool FM
“Haddii aan ku guuleysano Premier League waxay aamusin doontaa kuwa na neceb!” – Maguire
Dajiye February 5, 2021
(Manchester) 05 Feb 2021. Kabtanka kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa sheegay in haddii ay Red Devils ku guuleysato horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ay aamusiin doonto kuwa neceb iyaga.
Manchester United ayaa soo bandhigeysa natiijooyin wanaagsan xilli ciyaareedkaan kulamada Premier League, Red Devils ayaana ka mid noqotay kooxaha ugu cad cad ee kula tartamaya Man City hanashada horyaalka.
Wargeyska “The Sun” ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Kabtanka kooxda Manchester United ee Harry Maguire, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marka aan kor u qaado koobkayga ugu horeeya kooxda, waxay taasi wijigeyga ka dhigi doontaa inaan si weyn u dhoola cadeeyo, anigoo og in ay jiraan dad badan oo aan rabin inaan sidan sameyno.”
“Waxaa jira dad badan oo aan rabin, inaad si fiican wax u qabato.”
“Waxaa jira dad badan oo doonaya inay daawadaan anagoo guuldarreysaneyna, kani waa adduunka aan ku nool nahay, waana la qabsaday hadda.”
“Waa inaan bilowno u tartamida horyaalka oo aan ku guuleysano horyaalka, intaa kaddib waa inaan bilownaa inaan kor u qaadno koobab, iyo inaan ku guuleysano tartamada ugu waa weyn adduunka.”
Red Devils ayaa ku jirta booska labaad ee kala sareynta horyaalka Premier League iyagoo leh 44 dhibcood, waxayna 3 dhibcood ka hooseeyaan hoggaamiyaasha Man City oo sidoo kale kulan u harsan yahay.
Sidee Thomas Tuchel uga hadlay guushiisii ugu horreysay kulan London Derby ah ee kooxda Chelsea?
Xiddig hore kooxda Man United ah oo kula taliyay Solskjær inuu la soo saxiixdo laacibkan